के यो रोल र सुशी खान सम्भव छ?
एक कच्चा माछा हो, त्यसैले यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, उनीहरूले तयार पारेको, राम्रोसँग र तदनुसार, जसमा उनीहरू खानेकुराको प्रक्रियामा हुनेछ। प्रमाणित स्थानहरूमा सुशी खान राम्रो हुन्छ, जहाँ यो ज्ञात छ कि सरसफाई र स्वच्छताको अवस्था 100% को पालना गरिएको छ।
<< p> र बाँकी कीभीको बाँकी स्वादको लागि धेरै माया गरिन्छ। आज, सोया सॉसमा हुने फाइदाहरू र नोक्सान वैज्ञानिक विवादहरूको अधीनमा छन्। प्राकृतिक सोकी सॉस उपयोगी भिटामिन र म्याक्रोलेमेन्टको तालिका हो। यसले एस्ट्रोन हर्मोनहरूसँग मिल्दो तत्वहरू समावेश गर्दछ। ऐतिहासिकमा तिनीहरू उपयोगी छन्, तर औपचारिक फलहरूमा मस्तिष्कको विकासकालमा परम्परागत हुन सक्छ।
यो सॉस नुनको विकल्पको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, त्यसैले यसले शरीरमा पानी दिन्छ र एडेमाको कारण हुन सक्छ। थप रूपमा, उहाँ एकदम एलसार्जिकल उत्पादन हो र सीमित महिलाहरू र years बर्ष भन्दा कम उमेरका बच्चाहरूलाई सिफारिस गरिनु पर्दैन।
जापानी भाँडा हाम्रो साथ तुलनात्मक रूपमा देखा पर्यो, तर धेरैको दैनिक आहार त्यति नै तर्फ लाग्यो। ती मध्ये सब भन्दा साधारण सुशी र रोलहरू हुन्, जुन विभिन्न व्याख्यामा तयार हुन्छन्, सबैभन्दा असामान्य उत्पादनहरूको संयोजन गर्दछ। गर्भावस्थाको बखत, महिलाहरू प्रायः परिभाषित केहि चाहन्छन् र विरलै रोल हुने छैन। यद्यपि यो गर्भवती सुशी गर्न सम्भव छ - एक नाजुक प्रश्न, जसमा तपाईंले सावधानीपूर्वक बुझ्नु पर्छ।
हुनसक्नुहोस्, सबैलाई थाहा छ कि गर्भावस्था समय एकदम जटिल छ। यो स्थायी हर्मोनल परिवर्तन, मुड र स्वाद लिने भिन्नताहरू। यो अक्सर हुन्छ कि स्थितिमा भएको महिलाले पहिले खाएको उत्पादन कोशिस गर्नको लागि तीव्र इच्छा महसुस गर्न सक्दछ। भूमिका सहित।
रोलहरू र सुशी एकदम विशिष्ट छन्, तर अझै एक लोकप्रिय उत्पादन। तिनीहरूको स्वाद असामान्य छ, र फारम र उपस्थिति धेरै isching छ। यसैले जो महिला जसले हार्मोनल फस्टीको सामना गर्दै छन्, त्यस्ता विभिन्न प्रकारका प्रकारले काटिन सकिन्छ, तिनीहरूलाई मनपर्ने देब्रेता बनाउँदछन्। यो सम्झनको लागि लायक छ कि सबै खाना गर्भावस्थाको समयमा उपयोगी छैन, त्यसैले नयाँ व्यवहारहरूको साथसाथै रोलहरूको डेलिभरी अर्डर गर्नु अघि उनीहरूको स्वास्थ्य र बच्चाको लागि सुरक्षा निर्धारण गर्न लायक छ।
कती उपयोगी रोल र सुशी
जापानी खाना बरु सन्तुलन र उपयोगी छ। यसले बहुमूल्य ट्रेस तत्वहरू समावेश गर्दछ जुन पनि क्यालोरी हुँदैन। त्यसकारण प्रोटीन र कार्बोहाइड्रेटको सामग्री एक सामञ्जस्यपूर्ण सन्तुलनमा छ, यसैले घरमा लगातार यात्राको लागि लगातार प्रकोपले अधिक वजन सेट गर्दैन, जुन गर्भावस्थामा धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
उत्पादनहरूको प्रभाव जुन रोल र सुशी शरीर मा बनेको छ
EGE। यो जापानी भव्यता को निर्माण को लागी मुख्य उत्पादन हो। चामल उपयोगी पदार्थहरूको वास्तविक भण्डार हो। यो राम्रो शरीर द्वारा अवशोषित छ र सफलतापूर्वक कुनै अन्य उत्पादनहरु संग संयोजन गर्दछ।
माछा। सबै समुद्री खाना प्रोटिनमा धनी हुन्छन् त्यसैले तिनीहरू गर्भवती महिलालाई मात्र होइन, सबै व्यक्तिको लागि उपयोगी छन्। माछालाई फास्फोरस र आयोडाइनको साथ संतृप्त छ। थप रूपमा, यसमा ओमेगा3एसिड एसिड मिलेर छ जुन विकसित भ्रुण भ्रुण र उसको आमाको मस्तिष्कको कामलाई राम्रोसँग असर गरेको छ। यद्यपि ध्यानपूर्वक यस उत्पादनको चयनमा हेर्नुहोस्। तपाईंले सँधै शेल्फ लाइफ हेर्नु पर्छ, देखाइनुहोस्।
एल्गा नई। अँध्यारोको यो पाना, लगभग कालो र color ्ग ब्राउन एल्गाले बनेको छ। तिनीहरू आईडाइनमा धनी छन्, त्यसैले तिनीहरू थाइरोइड ग्रन्थिको प्रदर्शनलाई सामान्य गराउन सक्छन्। एल्गाले मोटापोलिज्मलाई गति दिन्छ, जुन पेटको फूल फुल्ने र यसको गम्भीरताबाट रोक्दछ।
रोल र सुशी
को प्रयोगको नकारात्मक पक्ष
अर्डर गर्नु अघि तपाईले माछाको खोजीमा ध्यान दिएर हेर्नु पर्छ। केही समुद्री खानामा त्यहाँ पाखरी र हानिकारक धातुहरू छन्, जुन स्पष्ट रूपमा भ्रुण र आमाका लागि डराउँदछन्। आदेश रोल र डोसुनो (Leubertsy) मा अर्डर गर्नुहोस् र रसियाका अन्य शहरहरू सजिलो छन्, जस्तो कि यो लोकप्रिय डिशको रूपमा। तर यस्तो वितरणको ठूलो माइनस भनेको रोल रोल भण्डारण लामो हुन सक्दैन। सही समय खाना पकाउने लगभग असम्भव छ, रेस्टुरेन्ट मालिकहरूको रूपमा अक्सर ओभरल उत्पादनहरू प्रयोग गर्न आउँदैन।
यो सम्झन लायक छ कि एक गर्भवती र स्तनपानली महिला सुरक्षित उत्पादनहरूमा पनि कमजोर छ। न्यूनतम क्षति एक पेट डिसअर्ड हो, तर जोखिम छैन। सोया सॉस अत्यधिक संसाधित हुन सक्छ, अम्बन्धन प्रायः गलत रूपले प्रशोधन हुन्छ, वेसाबी गर्भवती महिलाहरूमा रोल र खुवाइमा अस्वीकार गर्ने गहन कारणहरू हुन्।
खान सम्भव छ - विज्ञ रायहरू
अर्को स्थिति: यदि तपाईं गर्भावस्थाको अघि जापानी भाँडोमा रुचि राख्नु भएको छ भने, सुशी र रोलहरूको उपकरणलाई छुने अनुमति छ र बच्चालाई छुने अनुमति छ।
शरीरमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू थिए, र तपाईंलाई थाहा छैन कि तपाईंको शरीरले कसरी रोल र सुशीमा समावेश गरीएको विशेष कम्पोनेन्टमा प्रतिक्रिया गर्दछ।
महत्वपूर्ण! खानाको छनौटलाई चट्टान र सावधानीका साथ पुग्नु आवश्यक छ। तपाईंको अवस्था र भविष्यको बच्चाको स्वास्थ्य चयनित आहारमा निर्भर गर्दछ।
गर्भावस्था उपयोगीका लागि जापानी डेलीआट्सहरू हुन्?
<< p> तिनीहरू सबैभन्दा मूल्यवान ट्रेल तत्वहरूको स्रोत हुन्, जबकि कम क्यालोरिसको साथ एक आहार उत्पादनमा रहन्छन्, जुन यस अवधिमा थप पाउन्डहरू प्राप्त गर्न डराउँछन् जो यस अवधिमा अतिरिक्त पाउन्डहरू प्राप्त गर्छन्।
मुख्य घटक एक आहार उत्पादन हो। यसको फाइदा मात्र होइन कि यो सबै आवश्यक उपयोगी उपयोगी पदार्थहरूको सबैभन्दा धनी स्रोत हो। चामल अन्य उत्पादनहरूको साथ कमसँग मिल्छ र राम्रोसँग अवशोषित हुन्छ।
रोल, सुशी, वेसाबी - यो सबै यति दृढतापूर्वक हाम्रो आहारमा समावेश छ, जुन यो स्वाभाविकरण त्याग्न धेरै गाह्रो हुन्छ। यद्यपि भविष्यका भाइ आमाहरू यस्तो अवस्थामा उचित पोषणको मुद्दाहरूमा धेरै चासो लिन थाल्न सकिन्छ। र पहिलो शंका उठ्छ - के यो गर्भवती हुन सम्भव छ?
यो बाहिर जान्छ, गर्भावस्थामा रोलहरू अवांछनीय लाग्न। हामी सबैलाई थाहा छ कि खाना पकाउने सुशी र रोलहरूको लागि, शेफहरू कच्चा ताजा माछा प्रयोग गरिन्छ। र त्यस्ता माछाको मासु बिभिन्न परजीवीहरूको वाहक हुन सक्छ -, नेस्कोडहरू। र साधारण व्यक्तिहरूको लागि, मानिसहरू सुन्न धेरै खुशी छैनन्। र गर्भवती महिला र सबैको लागि, त्यस्ता ज्ञानले तिनीहरूलाई बच्चाको लागि डर ल्याउँछ र उनीहरूको स्वास्थ्यको लागि डरले डराउँछ।
पाठ्यक्रम, बच्चाको कामदारहरूले बच्चालाई प्रत्यक्ष हानि लिन सक्दैनन्। तर अप्रत्यक्ष रूपमा - धेरै। यो परजीवीहरूमा परजीवीहरू जसले उनीहरूको वरपरका उपयोगी पदार्थहरूमा फिगरहरूमा फीज गर्दछ - हाम्रो वरपरका उपयोगी पदार्थहरू खुवाउँदछन् - हाम्रो अवस्थामा गर्भवती मम्मीको शरीरबाट।
<< p> उनको उपयोगी पदार्थहरू लाई हटाउनुहुन्छ, तिनीहरूले अप्रत्यक्ष रूपमा बच्चाको स्वास्थ्य र विकासलाई हानी पुर्याउँछन्, किनकि यो अब यी धेरै पदार्थहरूसँग अभाव हुन सक्छ। हो, र आमा धेरै राम्रो महसुस गर्न सक्दैनन्। र यसको कुनै पनि नकारात्मक अवस्थाले बच्चालाई असर गर्छ। धेरै गर्भवती महिलाहरूको लागि रोलहरू त्यति सुरक्षित छैनन्।
तपाईको रूचिमा र अहिलेसम्म जन्मेको बच्चाको हितमा गर्भावस्थामा रोलहरूको प्रयोग त्याग्नु राम्रो हो। मलाई विश्वास गर्नुहोस्, जब तपाईंको बच्चाको जन्म हुन्छ र स्तनलाई खुवाउन रोक्दछ र स्तनलाई रोक्नुहुन्छ।
यदि यो पूर्ण नर्सचिंग छ - तपाइँले जलन वा धूम्रपान माछा फिल्टलेटबाट रोलहरू तयार गर्न सोध्नुहोस्। तिनीहरूमा सबै परजीवीहरू पहिले नै मरेका छन्, र यस्तो भाँडाले तपाईंलाई नयाँ बासिन्दाहरूलाई धम्की दिदैन।
बाटो द्वारा, जापानी भाँडा खाँदा अर्को नकारात्मक क्षण - अदुवा, जुन परम्परागत रूपमा सुख्खा र रोलहरूको साथ सेवा गरिन्छ। यसले तपाईंलाई अप्रत्याशित रूपमा एक मजबूत एलर्जी प्रतिक्रिया निम्त्याउन सक्छ।
यो अज्ञात किन हुन्छ किन यस्तो अज्ञात हुन्छ, तर प्राय: गर्भावस्थामा बिल्कुल सहि सहेका महिलाहरूमा, उनीहरूको चाखलाग्दो स्थितिको गम्भीर अनिर्टिकरियाबाट ग्रस्त छ। र कोही पनि अस्पतालमा गर्भिताको खतराको साथ खसे। यो यस्तो धूर्त छ।